भाग्यमानीले मात्र देख्ने यो दुर्लभ शंखको दर्शन गरि यसको महिमा पढी शेयर गर्नुहोस ! पाउँनुहुनेछ चमत्कारिक लाभ – purnakhabar.com
सम्पूर्ण खबर अब एकै ठाउँ, अब अरु हेर्नै पर्दैन
भाग्यमानीले मात्र देख्ने यो दुर्लभ शंखको दर्शन गरि यसको महिमा पढी शेयर गर्नुहोस ! पाउँनुहुनेछ चमत्कारिक लाभ
Posted on November 23, 2018 Author purnakhabar	Comment(0)
काठमाडौं । तपाई भाग्यमा कत्तिको विश्वास गर्नुहुन्छ ? गर्नुहुन्छ भने भाग्यमानीले मात्र देख्ने यो दुर्लभ दाहिने शंखलाई दर्शन गरि यसको महत्व जानी शेयर गर्नुहोला जिवनमा धन, सम्पती र खुसी पाउँनुहुनेछ । तपाईलाई सुनेर अचम्म लाग्न सक्छ कि संसारमा ५० हजार भन्दा धेरै प्रकारका शंख पाइन्छ ।
त्यहि ५० हजार मध्यमा कुनै प्रकारको शंख तपाईको घरमा हुन सक्छ। ती शंख मध्य केहि दस शंखका बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौं। शङ्ख शंखेकिराको खबटाबाट बनाइने एक प्रकारको वाद्ययन्त्र हो। यो विशेषगरी धार्मिक कार्यमा प्रयोग गरिन्छ । शङ्ख शंखेकिराको खबटाबाट बनाइने एक प्रकारको वाद्ययन्त्र हो यसका बारेमा त सबैंलाई जनकारी छ ।
जीउँदो शङ्ख समुद्रमा पाइने जलचरले बनाएको खबटा हो, यो धेरै जसो वामावर्त अथवा दक्षिणावर्तमा बनेको हुन्छ। प्राचीनकालदेखि नै विभिन्न प्रयोजनमा ल्याइने शंख एक प्रकारको समुद्री चिप्लेकिराको कडा आवरण हो ।
धार्मिक अवसर एवम् सांस्कृतिक कार्यमा यसलाई फूकेर बजाउन पनि सकिन्छ। तसर्थ यसलाई एक बाजाका रूपमा पनि लिइन्छ। नेपाल, भारत, श्रीलंका, बंगलादेश आदि मुलुकमा यसको यसरी प्रयोग भएको पाइन्छ । शंख विभिन्न किसिमका हुन्छन्, तीमध्ये दाहिना शंख बहुमूल्य मानिन्छ, जुन निकै महँगो हुन्छ ।
लाखौं शंखमा दाहिना शंख एउटा पाइन्छ । हिन्दू धर्ममा प्रयोगृसम्पादन गर्नेरामायण, महाभारतमा शंखको महिमा प्रसस्त छ भने हाम्रो समाजमा मंगल कार्यदेखि मृत्युजन्य शोकको घडीमा समेत शंखवादनलाई महत्त्व दिइन्छ । शंख बजाउँदा त्यसको ध्वनिले विभिन्न प्रकारका रोगाणु र विषाणुलाई मार्ने वर्णन ऋग्वेदमा छ । जुन धन प्राप्तको लागि शुभ शंख मानिने गर्छ।
मध्यावर्ति शंख यस अतभुत शंख : धेरै दुर्लभ मानिने गर्छ। यस शंखको मुखको बीचमा खुल्ला भाग रहेको हुन्छ। तपाईको सम्पूर्ण अभिलाषा पुरा गर्न यस शंख उपयोगी रहने गर्छ।
मावर्ति शंख यो शंख : प्राय बायाँ हातबाट पकडिइने गरिन्छ। यस शंख मिल्न धेरैनै दुर्लभ मानिन्छ भने यसलाई भेट्न असम्भवनै रहने गर्छ।
यस शंख चमत्कारिकले भरिपुर्ण हुन्छ भने यसको घरमा स्थापना संगै दरिद्रता हट्छ भने धन प्राप्तिको शृंखला सुरु हुने गर्छ।
मोती शंख : यस शंख मानसिक चिन्ता हटाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ भने श्वास(प्रश्वास सम्बन्धि समस्याको लागि पनि यस शंख काम आउने विश्वास गरिन्छ।
यस शंखलाई जहिले पनि गंगाजलले स्नान गरिने गरिन्छ।
गणेश शंख : यो एक दुर्लभ र चमत्कारिक शंख हो। यस शंखको रुप गणेशसंग मिल्न जाने भएका कारण पनि यसलाई गणेश शंख भनिने गरिन्छ ।
यस शंख घरबाट नकारत्मक नजर हटाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ भने घरमा यसले शान्त वातावरण राख्नको लागि मद्दत गर्ने गर्छ।
विष्णुशंख : यस शंख पूर्ण सेतो रंगको रहने गर्छ भने जटिल रूपाकृतिको रहने गर्छ। यस शंख भगवान विष्णुको वाहन गरुड़को आकृतिको रुपमा रहने गर्छ। यस शंखलाई धर्म शास्त्रमा “चन्द्र शंख”को रुपमा पनि वर्णन गरिएको छ। पवित्र, ईश्वरीय, दुर्लभ चमत्कारिक रुपमा जसको पनि बाधा, दुख दुर गराउन मद्दत यस शंखले गर्ने गर्छ।
दुर्लभ देवी शंख : यस शंख दुर्गाले हातमा बोक्ने गरेको शंखको रुपमा लिने गरिन्छ। धर्म शास्त्रमा यस शंखको ९ पटक प्रयोग गर्नेले असंख्य धन आर्जन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यस शंखलाई दैनिक पुञ्ज गर्नाले तपाईको घरमा लक्ष्मीको वास रहन सक्ला। यस शंखलै तपाईको गलामा बाध्ने शंख मालासंग अभिमंत्रित गर्नु भएमा अतुल धन मिल्न सक्छ।
मणिपुष्पक शंख : शंख महाभारत कालमा सहदेव बजाउने गरेका थिए। यस शंखले परिवारको सम्पूर्ण मनोकामना पुरा गर्न मद्दत गर्ने विश्वास गरिन्छ।
यस शंखको प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई हृदय रोग नलाग्ने विश्वास गरिन्छ भने शरीर स्वस्थ रहन्छ।
नीलकंठ शंख : यस शंख धार्मिक ग्रन्थका अनुसार भगवान शिवले समुन्द्र मन्थनको क्रममा निक्लेको विष शेवन गर्ने क्रममा नीलकंठ शंख माथि राखेर विष शेवन गरेको थिए।
यस शंख घरमा स्थापना गर्दा विषालु जनावरले दुख नदिने विश्वास गरिन्छ। यस शंखमा गाईको दुख राखेर पिउने गर्नाले स्वास्थ्य राम्रो हुने विश्वास गरिने गरिन्छ।
चक्र शंख : यस शंख भगवान विष्णुको साथमा सधै रहने गर्छ। यस शंख भगवान विष्णुले राक्षसको वधको लागि प्रयोग गर्ने गरेको धार्मिक ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ।
यसलाई अद्भुत कल्याणकारी साथै चमत्कारी शंखको रुपमा लिने गरिन्छ।
Journalist from Itahari
मोहम्मद डेका अवसरमा वीरगञ्जमा र्‍याली
Posted on November 21, 2018 Author purnakhabar
५ मंसिर, वीरगञ्ज । मुस्लिम धर्मालम्वीले आज इस्लाम धर्मका प्रवर्तक हजरत मोहम्मद पैगम्बर सल्लाह अलैवसल्लामको जन्म जयन्ती मनाएका छन् । मोहम्मद डे भनिने मोहम्मद पैगम्बरको जन्मदिनमा वीरगञ्जको घण्टाघरमा ठूलो संख्यामा जम्मा भएका मुस्लिम धर्माबलम्बीहरुले वृहत र्‍याली निकालेका छन् । घण्टाघरबाट निकालिएको र्‍याली माईस्थान, आदर्शनगर, विर्ता, छपकैयाँ हुँदै नगर परिक्रमा पछि पुनः घण्टाघरमा आएर समापन गरिएको […]
जब न्यायाधीश अभियुक्तको पछि–पछि दौडिए
Posted on October 31, 2018 Author purnakhabar
अमेरिकी सहर वाइनकस्थित अदालतमा एकजना न्यायाधीशले यस्तो हर्कत गरेका छन् जसले अदालतका सबै मानिसलाई खुबै मनोरञ्जन मात्र दिलाएन ती न्यायाधीशको प्रसंसा गर्नपनि सबै मानिस बाध्य भए । ती न्यायाधीशको नाम आर डब्लू बजार्ड हो । लुइस काउन्टी अदालतका न्यायाधीश हुन् उनी । उक्त अदालतमा सुनुवाई भैरहेको बेला दुईजना अभियुक्तहरु भाग्ने प्रयास गरे । अदालतबाट अभियुक्तहरु […]
हतियार देखाएर लुटपाट गर्ने भारतीयसहित ७ जना पक्राउ
Posted on September 28, 2018 Author purnakhabar
१२ असोज, सप्तरी । सिरहा प्रहरीले हतियार देखाएर लुटपाट गर्ने एक भारतीय नागरिकसहित सात जनालाई पक्रेको छ । उनीहरु हतियारसहित पक्राउ परेका हुन् । पक्राउ परेका ७ जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको छ । पक्राउ परेकाहरु हतियार देखाएर अर्नामा गाउँपालिकास्थित सिर्जना सामुदायिक सहकारी संस्थाका कर्मचारीसँग रकम लुटपाट गर्नेहरु रहेको […]
चमत्कारी गुणले भरिएको यो बिरूवा, समस्या आउनभन्दा अगाडि नै दिन्छ यस्ताे संकेत
कांग्रेसको विधानमा मनोनित र निर्वाचितको विवाद, किन जुटेन सहमति ?
आदिवासीको हातबाट मारिनुअघि धर्मप्रचारकले भनेका थिए, ‘प्रभू म मर्न चाहन्न’
Posted on November 23, 2018 Author purnakhabar
७ मंसिर, काठमाडौं । भारतको एक टापुमा बस्ने आदिवासीहरुलाई क्रिश्चियन बनाउने प्रयास गर्दा मारिएका एक अमेरिकी धर्मप्रचारक युवा मृत्युको अन्तिम पलसम्म पनि आफ्नो अभियान पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनको डायरीले देखाएको छ । अरु मानिसहरुसँग अझै पनि अलग रहेका सेन्टिनेली आदिवासी समूहले बंगालको खाडीमा रहेको सानो दुर्गम टापुमा मारेको अनुमान गरिएका जोन एलेन चाउको भेटिएका […]
अन्तर्राष्ट्रिय रोल्पाली सेवा समाज मलेसियाका संस्थापक अध्यक्ष घर्तिको उपचारका क्रममा निधन
मङ्सिर ७ रोल्पा । अन्तर्राष्ट्रिय रोल्पाली सेवा समाज मलेसियाका संस्थापक अध्यक्ष मोहन सिङ घर्ति मगरको निधन भएको छ । उपचारको क्रममा मङ्सिर ५ गते बुधबार कोहलपुर मेडीकल कलेजमा निधन भएको हो । घर्तीमगर लामो समय देखि सुगर र मधुमिया बिरामीले ग्रसित थिए । मगर उपचारको लागि मे ३० का दिन नेपाल आएका थिए । निरन्तर उपचारको क्रममा रहेका […]
विप्लवको जनसभामा कम्ब्याट ड्रेस लगाए पक्राउ पर्ने
७ मंसिर, काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको विप्लव समूहले शनिबार राजधानीमा गर्न लागेको आमसभालाई लक्षित गरेर प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ । कानुन विपरीतका गतिविधि हुनसक्ने विश्लेषणसहित सुरक्षा निकायले उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाएका हुन् । काठमाडौं प्रहरी परिसर स्रोतका अनुसार केही दिनयता उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकामा विशेष चेकजाँच र कडाइ गरिएको छ । […]
रियल मड्रिडमा सान्टियागो सोलारीको दोस्रो चरण
७ मंसिर, काठमाडौं । स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडको प्रशिक्षक बनेका सान्टियागो सोलारी आफ्नो कामलाई उत्कृष्ट बनाउँदै जिनेदिन जिदानको बाटो पछ्याउन चाहन्छन् । प्रशिक्षक जिदानले मड्रिडमा जस्तो उपलब्धी पाएका थिए त्यसमा सोलारी पुग्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने अड्कल भइरहेका बेला सबैले आफूमा विश्वास देखाउनु ठूलो कुरा भएको सोलारीले बताएका छन् । प्रशिक्षक जुलेन लोपेटेगी बर्खास्त भएपछि […]
एकताको नाममा अलमलिने समय छैन : कमल थापा
७ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले पार्टी एकताको नाममा अलमल गर्ने समय नभएको बताएका छन् । पार्टी संगठन निर्माणमा लाग्नुपर्ने भन्दै उनले पार्टी एकता वा अन्य नाममा अलमल गर्ने समय नभएको बताएका हुन् । पार्टीको संयोजित संगठन समन्वय विभागले शुक्रबार काठमाडौंमा गरेको उपत्यकास्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेलामा उनले एकताको ढोका खुला राखेर […]
dsgfdshg Select Month November 2018 (2208) October 2018 (2853) September 2018 (697) August 2018 (14) July 2018 (2) June 2018 (4) May 2018 (6) April 2018 (24) January 2018 (8) December 2017 (9) November 2017 (13) October 2017 (1) July 2017 (10)
नेपाल टेलिकमका ग्राहकलाई उपयोगी जानकारी – onlinedarpan:
रोयल र लुम्बिनी टीपीएलको फाइनलमा
PurnaKhabar is Nepal’s no one breaking news website with full features of personalisation. We deliver the latest updates on national and international issues including politics, sports, business and entertainment with photo, audio and video.
इश्वर कुमार भट्टरार्इ
सम्पूर्ण खबर अब एकै ठाउँ, अब अरु हेर्नै पर्दैन।
ठेगानाः नयाँ बानेश्वर, काठमाण्डाै
फाेन नम्बरः +977-9843358296
माेवाइल नम्बरः +977-9818853706
इमेल ठेगानाः purnakhabar@yahoo.com
2013 Purnakhabar.com | Eggnews by B-Tech Nepal.